Kwaye ngoku, njengangaphambili, i-oncology ithathwa njengengxaki kumachiza ehlabathini lonke. Kwaye kuphela ukuxilongwa kwesi sifo kwinqanaba lokuqala kwaye unyango olugqibeleleyo ngamachiza amatsha omnyaka wokugqibela wenkululeko unceda ngokwenene. Kodwa nakweyiphi na imeko inqanda kufuneka ibe nelungelo lokuthintela umdlavuza, kwaye luqulethwe kule ilandelayo:
I-carcinogens iyona nto ibangela umhlaza, kwaye oku kuboniswa nguvavanyo oluninzi lwezenzululwazi nophuhliso. Faka i-carcinogens ngokutya esikudlayo. Izifo ze-oncological zixhomekeke ngqo ekudleni kwethu. Ukuba sidla ukutya kwendalo equlethe zonke iivithamini kunye nezinto ezifunekayo kumzimba, kunye nezixhobo ezahlukahlukeneyo kwiindlela eziqhelekileyo zokuphendulwa kwezinto eziphilayo emzimbeni, sinceda umzimba ukuba umise ukukhula kwezinto ezinqwenelekayo. Iingcali zenzululwazi ziye zafakazela ukuba kukho iqela elincinane lokufunda elincinci elichaphazela igalelo, liphule inkqubo ye-fission kwaye ngokubangela ukuba kusebenze iinkqubo ezimbi. Ezi zixhobo ziyi-carcinogen efanayo.
Phakathi kwama-carcinogens, "i-polycyclic hydrocarbons" yizona nkokeli eziphambili. Ziyakhiwa ngokukodwa kwi-oxidation (ukushisa) kwezinto eziphilayo. Ngelo xesha, umhlaba, amanzi, umoya kunye nendawo yonke ingcolileyo. Emva koko ezi zixhobo zihlangene kwizityalo, ezisetyenziswa ngabantu nakwizilwanyana. Ngenxa yoko, baqokelela emzimbeni womntu. Ngokwabo, i-polycyclic hydrocarbons kwisigqeba semfuyo iqokelela ngenani elincinci. Ukwandisa ubungakanani babo bukhuthazwa ngumsebenzi womntu ngokwakhe. Umzekelo, xa utshaya umkhiqizo, inani le-polycyclic hydrocarbons landa kakhulu. Kuqikelelwa ukuba ama-grams amahlanu e-smoked sausage aqukethe i-polycyclic hydrocarbons efana neepakethi ye-cigarettes. Kwaye ezi zinto zibangela izifo ze-ecological of organes digestive, inkqubo yokuphefumula kunye nomhlaza wesifuba.
Iqela elilandelayo eliyingozi kakhulu li-nitrates. Kodwa ezi zi-nitrates, ezisetyenzisiweyo njengezichumisi zamaminerali kwicandelo lezolimo. Ezi zibizwa ngokuba yi-carcinogenic nitrate. Bangela umdlavuza we-genitourinary system, inkqubo yokutya, umhlaza we-nasopharynx kunye nengqondo.
Kwaye elinye iqela eliyingozi le-carcinogens, elifuneka kwakhona ukuba liqwalasele i-mycotoxins. Ezi zinto zakhiwa ngokukodwa zifake isikhunta. Ziyakhelwe ngenxa yento yazo ebalulekileyo. Zibeka ingozi enkulu kuthi, kuba abulawa ngokubilisa ixesha elide, aziwa phantsi kwamaqondo aphezulu. Ngoko ke, kwikhikhati eqhelekileyo, abanalo iindlela zokupheka. Akunako ukuvumba, akukho nto kwaye angayibetha amahora amathathu. Eyona nto, ibangela izifo ezingumzimba zamathumbu, isibindi nesisu.
Musa ukulibala malunga nama-carcinogens asetyenziswa kwizolimo (izibulala-zinambuzane, i-herbicides kunye ne-fungicides). Kananjalo ekudleni kunokuquka ezinye iingozi ze-carcinogens (i-radionuclides kunye neerati zensimbi ezinzima).
Nazi imigaqo embalwa eya kunceda encinane ukunciphisa ingozi yokutya oyidlayo.
Ukufumana ukutya kwiindawo ezilawulwayo, apho kukho inkonzo yezitishi ze-epidemiological.
Gcina imifuno kunye neziqhamo kumafriji, kwaye ngaphambi kokucoca, hlalisa rhoqo amanzi. Jonganisa ulusu ngonqabileyo.
Ungayisebenzisi ukutya okubumbayo, okubolile kunye nokuphanga.
Gcina ngokupheleleyo imiqathango kunye nemigangatho yokugcinwa kwayo yonke imveliso yokutya. Ukuhlawula ngokukhethekileyo kwimveliso etshabalalayo.
Xa ukhanga, awukwazi ukulinda ioli ifume. Sebenzisa ukutya okuthosiweyo.
Ukuba kunokwenzeka, phelelwa ngokupheleleyo ukutshaya.
Musa ukutya ukutya okukhawulezileyo (amaFries, ama-chips, i-belyashi, ii-pies, i-chebureks).
Ukunciphisa ngokukhawuleza ukungenisa ityuwa yetyuwa kunye neentlobo zezilwanyana.
Zihlolisise rhoqo ii-mushroom eziqokelelweyo kunye namajikijolo ama-radionuclides.
Iimpawu eziwusizo ze-turmeric
Inendima ye-microelements kumzimba womntu
Amandla amabhinqa kunye nendlela yokuzalisa iimpahla zayo
Intetho yomntwana kunyaka wesithathu wobomi
Ukupheka kwezitya zeCaucasian cuisine (inxalenye eyodwa)
Yintoni eya kuba ngowama-2018 Inja zeGemini
Ingxaki yokuxhatshazwa kwikhompyutha kubantwana
Indlela yokubhala kwi-USE
Iimpawu ezihamba phambili ukuya kuma-ruble angu-625: Umgangatho awukho ngaphantsi kwe-suite!